၁၉၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကပြောခဲ့သည့် လီနင်၏စကားအချို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သူတောင်းစားတွေဖြစ်နေတယ် … စက္ကူမရှိဘူး …
အလုပ်သမားတွေ ငတ်ပြီး ချမ်းချမ်းစီးစီးဖြစ်နေကြတယ် …
သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး … ဖိနပ်မရှိဘူး … စက်ယန္တရားတွေကလည်း ပျက်ကုန်ပြီ …
အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် … စက္ကူမရှိဘူး …
အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် … ဖိနပ်မရှိဘူး …
သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး … စက်ယန္တရားတွေလည်း ပျက်ကုန်ပြီ …
စက္ကူမရှိဘူး … ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သူတောင်းစားတွေဖြစ်နေတယ် …
ဖိနပ်မရှိဘူး … အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် …
စက်ယန္တရားတွေလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး …
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သူတောင်းစားတွေ ဖြစ်နေတယ် … စက္ကူမရှိဘူး …
အလုပ်သမားတွေ ငတ်ပြီး ချမ်းချမ်းစီးစီးဖြစ်နေကြတယ် … သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး … ဖိနပ်မရှိဘူး …
စက်ယန္တရားတွေကလည်းပျက်ကုန်ပြီ …. အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် …. စက္ကူမရှိဘူး …
စက်ယန္တရားတွေကလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် … ဖိနပ်မရှိဘူး …
သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး … စက်ယန္တရားတွေလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … စက္ကူမရှိဘူး …
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သူတောင်းစားတွေဖြစ်နေတယ် … ဖိနပ်မရှိဘူး …
အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် … အလုပ်သမားတွေ ငတ်ပြီး ချမ်းချမ်းစီးစီးဖြစ်နေကြတယ် …
စက်ယန္တရားတွေလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိဘူး … ဖိနပ်မရှိဘူး …
စက်ယန္တရားတွေကလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် …
စက်ယန္တရားတွေလည်း ပျက်ကုန်ပြီ … အဆောက်အအုံတွေကလည်း ပြိုကျတော့မယ် ….။ ။